Ngakule ubudala, abafana abaningi bayaqaphela ukuthi amadoda, futhi abaningi babo ekuqaleni ukuba banake ukubukeka kwabo bese ulandela isithombe. Lapho eneminyaka engu efanayo kancane kancane kwakheka wesithunywa obala. Ngakho-ke, ukwenza isipho kwesokudla kumelwe ucabangele zonke lezi zici.
Yini ukunikeza umfana oneminyaka engu-14 ngosuku lokuzalwa? Kungenzeka zakamuva computer imidlalo esuselwa, izingubo imfashini, idivayisi yeselula yesimanje, ithebhulethi, nokuningi, njengoba ingane, "esho," ngenjabulo.
Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi engu-14 Akuyona iminyaka yezingane ithoyizi kuyoba endaweni, ngaphandle yonke imidlalo efanayo computer, bese kuphela uma ingane unesithakazelo kubo. Ngakho-ke, isipho kufanele ucabangele ngokucophelela, bese unquma ukuthi kungakanani ongakusho oyosichitha kukho.
- Intsha bakhuthele ngalesi yobudala, ngakho uyokwazi ukucabanga kahle mayelana nokuthi ungasiza kanjani umfana sengathi indoda yangempela. Ungakwazi ahlele peyntol umdlalo, kwendlu noma ngaphandle, nethimba izokuba abangane ngimenywe edilini lokugubha. The guys Umnandi kakhulu ukuba uchithe isikhathi, futhi isipho esinjalo ukukhumbula.
- Kwekuheha izesekeli kakhulu, akufanele neze kushaywe indiva, ngisho enhloko-dolobha, ungathola izindawo ezikhethekile evumela ukushwibeka ebusika, futhi ngemva kwakhe futhi uthathe esinye ngubo.
- Ungakhohlwa mayelana amakha ezinhle: ayinayo ukuba makha abizayo, ephelele njengesipho futhi perfume toilette kube luqhatshi aqabulayo okumnandi, namkha isethi sakhiwa okuhlukile, kodwa nomunye elibi isiqedaphunga, imoto, eshaweni gel futhi imikhiqizo ukunakekelwa kwesikhumba.
- Abafana abaningi baphupha ukufunda ukudlala isiginci noma synthesizer, futhi abanye bangase babe ukudlala ngisho ingoma noma ukulele ambalwa. Uma abadala ukwazi abanothando lomculo, kuyoba isipho emnandi kakhulu insimbi osemusha zomculo.
- izesekeli zikanokusho intsha ziyokuwa esemncane ukunambitha, ezifana ibhande noma izibuko ezintsha imfashini, ngoba ngalesi yobudala abafana ukunakwa ligxile intombi, ukuze isithombe yangaphandle kubaluleke kakhulu. Nge izesekeli ingane amehlo futhi yaba undab 'uzekwayo ontanga nabangane.
- Ukuya esitolo bese ukhetha umdlalo-computer, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi idrayivu ilayisensi futhi kuyinto okufushane umnyuziki of the game. Njengoba i ungeze samanje, ungakwazi asheshise ikhaya internet ukuxhumana kunethiwekhi futhi ukudlala online zilethwe fun ngisho nangokwengeziwe.
Indlela ukunciphisa umzimba ngamanzi - umbuzo oyithandayo abesifazane abaningi